ikhaya IIMALI ZE-EUROPE I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqaku le-Biografics yeNobold
Oktobha 19, 2019
I-LB ibonisa iNqaku elipheleleyo leGlaus Genius eyaziwayo ngegama elithi "Inenkani". Ibali lethu leTyrone Mings Ubuntwana kunye neNqaku le-Biology le-Toldone lizisa iakhawunti epheleleyo yeziganeko eziphawulekayo ukususela ngexesha lakhe lobuntwana ukuza kuthi ga ngoku.
Ubomi kunye nokuPhakama kweTirone Mings. Ityala lemifanekiso: DailyMail, iTV, I-TbrFootball kwaye mva
Ewe, uninzi lwabalandeli bamazi ngexesha lakhe lokuya eNgilane, umdlalo wokuqala owathiwa wagcotshwa zizangoma zobuhlanga ezivela kubalandeli baseBulgaria. Nangona kunjalo, bambalwa kuphela abajonga iTogone Mings biography enomdla kakhulu. Ngoku ngaphandle kokudibanisa okunye, masiqalise.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ubomi bokuqala kunye neNtsapho yaseMvelaphi
UTyrone Deon Mings wazalwa ngomhla we-13th ka-Matshi 1993 kunina, uDawn Johnson kunye noyise, uAdrian AKA Adie Mings kwisixeko saseBhaf, e-United Kingdom. Wazalwa njengonyana okuphela kwamantombazana amathathu kubazali bakhe abathandekayo abaneemvelaphi ezahlukeneyo.
Dibana noTrisone Mings Bazali-UDawn Johnson kunye no-Adie Mings. Ityala lemifanekiso: Twitter
I-Tyrone Mings inosapho lwayo oluvela eBarbados ngecala lakhe. Njengoko kubonwe ngezantsi, eli lizwe sisiqithi esikummandla weCaribbean kuMntla Merika. Ubusazi?… Yindawo awazalelwa kuyo imvumi eyaziwayo rihanna. Njengendawo elungileyo yeswekile, ilizwe laba liziko lesiNgesi lokurhweba ngamakhoboka eAfrika nge1807. Oku kuthetha ukuba abahlali baseBarbados abamnyama phantse bonke abamnyama babandakanya iTogo ye-Mings yoomakhulu kunye neengcambu zase-Afrika.
Tyrone Mings Imvelaphi yosapho ichaziwe. Ityala lemifanekiso: WorldAtlas
UTyron Mings wayenobomi obunzima bokuqala ngelixa wayekhula ecaleni komama kunye noodadewabo abathathu. Njengomntwana omncinci, wabona ubungqina obunciphayo phakathi kukamama notata njengoko babesahlukana, emva koko umama wakhe wamthatha yena kunye noodadewabo. Ekuqaleni, baya kuhlala nomhlobo osenyongweni kukamama wakhe eChippenham (Idolophu yaseNgilani) njengoko kwakungekho enye indlela. Ngenye imini, bobabini, ooMings, umamakhe kunye noodadewabo ngenxa yeengxaki ababezenza, bagqiba kwelokuba bayishiya le ndawo, bengenayo enye indawo abanokuya kuyo kwaye kungekho mali yokufumana elinye ikhaya.
Ngelixa echaza imvelaphi yakhe yosapho ehlwempuzekileyo kunye nendlela abakhulele ngayo kwi Telegraph, wathi ubomi buguqukele ezantsi xa baphinde bajongana nolunye uhlobo ngaphandle kokuhlala kwindawo engenakhaya. Ngelixa wayekhuselekile, u-Mings, umama wakhe uDawn kunye no dade abathathu bonke babelane ngeebhedi ezimbini ezinesitayile.
Ngexesha lobomi bakhe bobuNtwana, uTyrone Mings, oomama noodadewabo bonke babehlala kwikhaya elingenakhaya. Ikhredithi: I-VoiceofOC & Mail Daily
Asinguye wonke umntu kwindawo yokuhlala owayemnandi kubo. Bobabini umama, unyana kunye neentombi baphila ubomi obubi njengoko phantse yonke into yabiwa esidlangalaleni Yinike igama…; indawo yokuhlamba, izindlu zangasese, iishawari zokuhlangana, njl.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Imfundo kunye neBraduer Buildup
Ngexesha ehlala kwindawo yokuhlala engenabantu, u-Mings waziva isidingo zokuya esikolweni ukuze enze into ebomini bakhe. Kude nesikolo, ibhola yaba lusindiso kuye kwaye ekuphela komthombo wentuthuzelo kude kwizinto eziyinene.
Isifundo seTirone Mings sidityaniswe nebhola. Ikhredithi kwi-HPR nakwiDailyMail.
Ukuba bhetele kunabo bonke abanye abantwana kumdlalo, uTyrone Mings wayesazi ukuba unetalente kwaye unokwenza into ebomini bakhe ngebhola. Ukujonga ubunzima awayejamelene nabo ngelo xesha, yonke into awayeyifuna yayikukusebenzisa ibhola ekhatywayo ukukhulisa imvelaphi yakhe engentle yosapho.
Ukufezekisa isiqalo esihle somsebenzi, waqala ukuzifumana rhoqo kumdlalo webhola ekhatywayo, efunda urhwebo lwebhola njengomkhuseli onzima nothintelayo. Emva phaya ngelixa wayedlala ibhola, ababukeli ababelazi ibali losapho lakwaTyrone Mings nendawo yokuhlala engenabantu bambonisa imbeko + yenkuthazo njengoko bengazange bathandabuze ukuba wayesiya kwicala elifanelekileyo.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ubomi bokuqala
Iqhayiya likanina noodadewabo babengazi mida xa ithamsanqa iMings ngokusebenza nzima kunye nokuchongwa ukuba abizelwe kwiimvavanyo zebhola kunye neSouthampton academy. Kwiminyaka yesibhozo (unyaka we-2001), u-Mings wabhaliswa kwiziko lemfundo emva kokuphumelela kwizilingo ezinemibala ebalekayo.
U-Tyrone Mings Ubomi bokuqala ngeBhola- Iintsuku zakhe eSouthampton Academy. Ityala lemifanekiso: DailyMail
Ukujoyina, bekumnandi kumkhuseli omncinci. Kodwa uTyrone Mings omncinci kwafuneka ancame izinto ezininzi ukuze akhule ngokwamanqanaba ezifundo. Ukuba sesinye sezona zifundo zibalaseleyo eNgilani, ezizezinye zeetalente ezikumgangatho wehlabathi- ukuthanda kuka-Alan Shearer, uGareth Bale njl njl, kukho ukhuphiswano olukhulu lweendawo kunye nezoyikiso zokukhutshwa.
Unyaka we-2009 wawungunyaka olubi kakhulu kusapho lweTrisone Mings. Isikhuseli esithembisayo sikhutshwe ngabaNgcwele kwi2009 (eneminyaka eyi-15) xa i-academy ibanga ukuba ibikho ngenxa yohlahlo-lwabiwo mali lolutsha.
I-Tyrone Mings yawa lixhoba kungekuphela nje ngenxa yento ebizwa ngokuba 'ukusikwa kohlahlo-lwabiwo mali'kodwa kwakhona ngenxa yokuba iklabhu immangalele ukuba ulusu kakhulu okanye akanamandla. Babengazi ukuba benza impazamo enkulu yokukhupha i-6 yeenyawo i-intshi ye-5 (Ubude beTirone Mings) Isakhelo se-hulking kunye nomdlali we-England welinye ilizwe.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Indlela eya kwiSifa
Nawuphi na umdlali webhola ophulwe kwimvelaphi yosapho ehluphekayo kwaye oye waphila ngokulahlwa yindawo yebhola ekhatywayo, uya kuyazi kakuhle intlungu enzulu kunye nemiphumo eyenzakalisayo yengqondo enokubakho. Ngokuthembela okuncinci okanye ukungathembani kumdlalo, uTyrone Mills ohluphekileyo uthathe isigqibo sokuyeka ibhola xa wayengu-15. Udakumbe kakhulu!!
UTyrone Mings uqhubekile wakhangela umsebenzi eChippenham, idolophu enkulu yezentengiso emantla ntshona eWiltshire, eNgilani. Umsebenzi wakhe wokuqala yayiyindawo yokushicilela (kwigumbi lokuhlala likawonkewonke) apho wayekhupha iipipe (wakhonza ibhiya) ngomvuzo we- £ 45-ngeveki. Kwibhoso yokongeza umvuzo wakhe ukuze ahlawule amatyala, uTyrone wagqiba kwelokuba aye kufuna umsebenzi kwenye indawo.
I-White Hart pub ese Chippenham apho iMings yatsala khona iipips. Ityala lemifanekiso: I-EuroSports kwaye Ilanga
Mings ekugqibeleni wafumana umsebenzi wokucebisa ngempahla mboleko (umcebisi wempahla mboleko), umsebenzi olungileyo ukuhlawula amatyala akhe. Ngexesha esebenza, waya kwisikolo iMillfield eSomerset iminyaka emibini. Isikolo emva kokuva ibali lakhe lokungakhathalelwa entliziyweni lalinobubele ngokwaneleyo ukuba limnike isifundo sebhola, into eyenze ukuba uMings abuyele ezingqondweni aze abuyele ebholeni.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ukunyuka ukuya kudumo
Emva kokushiya isikolo, iMings scholarship yamfaka kwi-Yate Town yase-Yate eGloucestershire. Apho, inkwenkwana ihlwempu yaqala ukulwa indlela yakhe. Ngehlobo le2012, waphakama njengoko wamkelwe liqela lakhe leqela ledolophu iChippenham Idolophu. Iklabhu yamnika ithuba lokuya kwiimvavanyo ezininzi kwenye indawo njengoko wayekhuphe iqela libonga ngenxa yeempawu zakhe.
UTyrone Mings wanikwa isifundi sebhola esamnceda ukuba abuyele ebholeni. Ityala lemifanekiso: Ilanga
Emva kwezilingo ezingaphumelelanga eCardiff City, eSwindon Town, ePortsmouth naseBristol Rovers, iiMings ezinomoya ongasokuze ufe zatsalwa ngumkhuseli we-Ipswich uRussel Osman ogqiba ukumnceda. Ngethamsanqa ebeya kuba nayo, u-Osman ucebise u-Mings kumphathi we-Ipswich Town u-Mick McCarthy ommemele ityala.
Endaweni yokuqunjelwa kwidolophu yase-Ipswich, isikhuseli esinciphileyo sakhula ukusuka kumandla ukuya emandleni, sisuka kufutshane ne-zero ukuya kwiqhawe elingathandabuzekiyo nokubuyisa umphathi wakhe (umncedisi wommiselo) ngemiboniso yakhe emihle.
I-Tyrone Mings ikhule ukusuka kumandla ukuya ekuxhaseni umphathi wakhe. Ityala lemifanekiso: Ilanga
Ukuqala kokuphumelela kwakhe kwenzeka xa ebophethe uMdlali oNtshatsheli weembasa zeNyanga kwisizini ye2014 / 2015. Oku kwenza umtsalane kwiiklabhu zePremier League ezazicenga ukuba zityikitye.
Kwi-26 kaJuni 2015, ii-Mings zisayinwe kwi-AFC Bournemouth. Ukuze ugweme ukukhuphisana neendawo, wamkela intshukumo yemali mboleko ukuya eAston Villa. Esi sigqibo sabona utshintsho olukhulu ebomini bakhe. E-villa, umkhuseli omkhulu we-6-unyawo-5 unyamezele Ukunyuka kwezulu. Waba yenye yeenkwenkwezi zamadoda incedise i-villa ekuzuzeni i-2019 EFL Championship play-offs.
UTyrone Mings waba yintandokazi yabanye njengoko wayenceda iVilla kukhusela i-2019 EFL Championship play-offs. Ityala lemifanekiso: Twitter
Emva kokunceda i-Aston Villa kunyuso, ii-Mings ziba yinto ethandekayo yabalandeli. Kungekudala, waba Enye yezona ndawo zishushu zokuzikhusela eNgilani. Ukunyuka okunjalo kwamfumana indawo kwiqela lesizwe laseNgilani. Kwaye kwamenza ukuba afumane iqela lesizwe lesiNgesi elalizele ligcuntselwe yimikhosi yobuhlanga evela kubalandeli baseBulgaria.
Uyabona, inkwenkwana eyakhe yaphila indawo yokuhlala engenakhaya, ngoku iqhuma phambi kwamehlo abalandeli bebhola. Bonke abanye, njengoko bethetha, ngoku iimbali.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ulwalamano lobomi
Ngokunyuka kwakhe ukuba nodumo kunye nokwenza i-England yakhe ibe qatha, kuyacaca ukuba abalandeli abaninzi bebhola kufuneka babuze ukuba ngubani na intombi kaTyrone Mings. Akukho nto iphikayo into yokuba udumo lwayo, imbonakalo entle edibeneyo kunye ne-6 ft 5 ukuphakama bekungayi kumenza angathandeki kumanenekazi.
Nangona kunjalo, emva kwebhola eliphumeleleyo, kukho intombi ebukekayo engaziwa kancinci malunga nayo. Inyani yile- Ngexesha lokubhalwa, ezothando ezifihlakeleyo ezinokubakho zeTirone Mings yenye ebalekayo ukujonga amehlo oluntu ngenxa yokuba ubomi bakhe bothando babucala kakhulu kwaye kusenokwenzeka ukuba akukho mdlalo-wedrama.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ubomi bomntu
Ukwazi iTrone Mings ngobomi bakho buqu kude nemisebenzi yakhe ebaleni kuya kukunceda ufumane umfanekiso obalaseleyo wobuntu bakhe.
Ukuqala phantsi, ii-Mings ngumntu onqabileyo onomdla kwaye uhlala ephupha kwimfuno yakhe yobukhulu. Ukude kwibhola ekhatywayo, uhlala echitha ixesha elininzi ejimini ukwakha umthambo wakhe kunye nomzimba onzima. Ngaphandle kwebhola, uMings uzibona engusomashishini. Ubusazi?… Unenkampani yoyilo lwangaphakathi e-Bournemouth.
Ukuqonda ubuntu beTirone Mings buvele kwisandi. Ikhredithi kwi-IG
Kwinkqubo yobomi bukaTyron Mings, ungumntu ongazicingeliyo othanda ukunceda abanye ngaphandle kwethemba lokufumana nantoni na ngembuyekezo. Ngelixa uninzi lwabantu luyonwabela usuku lweKrisimesi kunye neentsapho zabo. UTyrone Mings kunye nentombi yakhe banika ixesha labo kwithamsanqa elincinci kwiindawo zokuhlala ezingenamakhaya, bekhupha ukutya kunye nexabiso.
I-Tyrone Mings ibuyisa umva ngokundwendwela kunye nokunceda abantu abahlala kwindawo yokuhlala engenakhaya. Ityala: Inkswich inkwenkwezi
Ngaphandle kwamathandabuzo, iTrone Mings Ubomi bobuqu buphawulwa ngovelwano kwaye buchaze amandla ovakalelo.
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Ubomi Bentsapho
Ibali losapho leTyrone Mings lifundise abantu abaninzi abasokolayo, kodwa bezimisele ukuphumeza okukhulu 'eyona ndlela yokuziva unganathemba kukuphakama wenze into'. Ngexesha lokubhalwa, uTyron Mings ukhulise eyakhe usapho ngaphambili kwinkululeko yezemali, yonke into ibonga kwibhola ekhatywayo. Ngoku, masikunike ukuqonda okungakumbi kumalungu osapho lwakhe.
Ukwazi ngakumbi ngeTirone Mings Tata: Ibhola kusapho ayizange iqale ngeTrone. Ubusazi?… Utata wakhe u-Adie Mings wayengumdlali webhola ngaphambili kwiBat City kunye naseGloucester City. Intliziyo exolelweyo yeTyron Mings incedise ukumanyanisa bobabini utata kunye nonyana. Ubusazi?… Bobabini utata kunye nonyana basabandakanyeka kumgca wokurhweba ofanayo. I-Adie Mings njengoko ngexesha lokubhala lisebenza njenge-Scout yeqela lebhola ekhatywayo laseChelsea.
I-Tyrone Mings inokwenzeka kunye notata wakhe-Adie Mings. Ityala lemifanekiso: I-Instagram
Ukwazi ngakumbi malunga noTyron Mings Umama: UDawn Johnson bagan wathwala igama likayise emva kokuhlukana nomyeni wakhe kwiminyaka embalwa emva kokuba bedibene. Ukusa, umama onamandla akaxeleli uNyana wakhe, ukuba abuthathaka ukuze iingcuka zobunzima zimfumane. Endaweni yoko, wambamba wamxhasa wamxhasa kulo lonke ixesha lokufuna ubukhulu. U-Dawn mhle kunye nonyana wakhe ngexesha lokubhalwa, ngoku bonwaba kakhulu ebomini.
UTyrone Mings uphuma kunye noMama wakhe-uDawn Johnson
Ukwazi ngakumbi ngeTirone Mings Siblings: Oodade be-Mings nguCherrelle Mings, u-Iesha Mings kunye nomnye owaziwa kancinci malunga naye. Ebulela oodadewabo, njengoko babemi ngakuye ngalo lonke ixesha lokuzama kwakhe, uMings ukhe wathetha ngamazwi akhe “Andizange ndide ndibafune abahlobo abakhulayo bonke ngenxa yokuba ndinoodadewethu". Ngexesha lokubhalwa, omnye udade wabo ogama linguCherrelle Mings ngoku ogama linguCherrelle Baram) utshatile.
I-Tyrone Mings inokwenzeka kunye noodadewabo abathandekayo- UCherrelle (ngasekhohlo) noLesha (ngasekunene) abathathe emva kokujonga kukanina .. Ityala: IG
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - yokuPhila
Ukwazi iTrisone Mings Indlela yokuphila kuya kukunceda ufumane umfanekiso opheleleyo wenqanaba lakhe lokuphila. Ukuqala phantsi, nokuba wenze imali eninzi kubububi obuyimfuneko, iTirone Mings ayiziboni iphila ubomi obuqhelekilyo obonwa ngokulula ziimoto ezinamabala kunye nezindlu. Uqhuba imoto yebhola yomnyazi ophakathi, uphawu oluphila ngokuthobeka.
Iitrone Mings iqhuba umndilili webhola yomnyazi ophezulu. Ityala lemifanekiso: IG
I-Tyrone Mings yenza iimali ezaneleyo azityala kwishishini lakhe, ezichitha imali yesisa kwaye okona kubaluleke kakhulu, enye ayisebenzisela ukuhlala ubomi obumnandi kumanxweme olwandle athandwayo njengeyona ndawo ayithandayo ngeholide. Apha ngezantsi kukho iifoto zeMings kunokwenzeka ngelixa uyonwabela ukukhwela inqanawa yakhe.
Indlela yobomi bukaTyrone Mings- Uyathanda ukuchitha iimali zakhe kulwandle olunwabisayo ukukhwela inqanawa. Ityala lemifanekiso: IG
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Inyaniso engekho
Waye ke uFundela abantu abatshiweyo abathenga ihempe yakhe yakudala: Kanye kwi-2014, iTyrone Mings yatshintsha inombolo yehempe yakhe ukusuka kwi-No15 ukuya kwi-No3 emva kokutshintshelwa kuka-Aaron Cresswell eWest Ham United. Eli nyathelo liza emva kwexesha emva kokuba i-jerseys yakhe yeN15 sele ithengiwe ngabalandeli bakhe. Ubusazi?… U-Mings wayenobubele kangangokuba wathembisa ngokuthenga iihempe ezintsha zabalandeli ababethenge ihempe ngenombolo yakhe yakudala ye-15 eprintiweyo ngasemva.
UTirone Mings- uncome isenzo esikhulu emva kokuthembisa ngokuthenga ihempe ezintsha zabalandeli ababenenombolo yakhe yakudala yeqela. Ityala elinomfanekiso BBC sidlula kwi-GENEN PARKER / TOM PULLEN.
Wake wafaka isitampu kwiNtloko kaZlatan Ibrahimovic: Tyrone U-Mings ukhe wenza okungathandekiyo- otyholwa ngokunyathela entlokweni kaZlatan Ibrahimovic, isenzo esambangela ukuba arhoxiswe kwimidlalo emihlanu. Kuba 'Zlatan"UZlatan akakhange azive zintlungu kwaye umdlalo uphindaphindeka ngokuziphindezela engqondweni yakhe.
I-Tyrone Mings yafakwa isitampu kwintloko kaZlatan Ibrahimovics. Ityala: Ilanga
Emva kwemizuzu embalwa kumdlalo, uZlatan Ibrahimovic uthathe ithuba lokuziphindezela kwiMings. Ngeli xesha, ilungelo lase-Sweden lamsongela ngexesha lokukhaba kwikona awayibanga ukuba yayinguMings owangena ngethamsanqa kwiwele lakhe.
I-Tyrone Mings kunye neZlatan Ibrahimovic Feud. Ityala lemifanekiso: TheGuardian
Ngaphandle kwe-elbow, yayiyi-Tyrone Mings eyafumana ukuvinjwa okude. Kungenxa yokuba isitampu sithathwa njengeyona nto ibaluleke kakhulu kwisiNgesi. Apha ngezantsi kukho isiqwenga sobungqina bevidiyo yeMings ngengozi yanyathela entlokweni ka-Ibrahimovic.
Iinyani zeTrans Mings zoTato: Iitrone Mings ' umzimba ubheka umzimba wakhe njengento yakhe. Unee-tattoos ezenziwe ngoyilo olukhethekileyo olubonisa iisimboli 'zeliso, iwotshi kunye nomntwana' ezinamanqaku amava akhe xa wayesengumntwana.
Itrato Mings Tattoo. Ikhredithi yemifanekiso: IJasonPixs kunye ne-Instagram
Tyrone Mings Ibhola ekhatywayo: I-Tyrone Mings ine-football academy ebizwa ngokuba "Isikolo seTirone Mings”Ehlala eBirmingham, eNgilane. Isikolo samkela abantwana (abesilisa nabasetyhini) abaphakathi kweminyaka ye-6 kunye ne-16. Ukuba nesikolo esisesakhe yindlela yakhe yokubuyisela eluntwini ngorhwebo.
Isikolo seTirone Mings. Ityala lemifanekiso: TMA
I-Tyrone Mings Ibali lokuKhula koMntwana kunye neNqanaba le-Biology ye-Toldone - Isishwankathelo seVidiyo
Fumana ngezantsi ividiyo yethu yeSishwankathelo sale profayili. Ngobubele Ndwendwela kwaye ubhalise lethu Isiteshi se Youtube. Kwakhona, cofa ubhaliso kwi-Icon yeZaziso.
QHUBEKA: Siyabonga ngokufunda yethu I-Tyrone Mings Ibali lokukhula komntwana kunye neNqaku le-Biology le-Untold. at LifeBogger, silwela ukuchaneka nokulingana. Ukuba ufumana into engabonakali kakuhle, nceda usabelo nathi ngokuphawula ngezansi. Siya kuhlala sixabisa kwaye siyihlonele imibono yakho.
I-AFC yeBournemouth Ibhola yeDlalo
Idayari yeBhola yeBhola yeAston Villa
Ngamana 27, 2019
I-Ryan Fraser Ibali leBantwana kunye ne-Untold Biography Facts
Ibali likaJames Maddison Ubuncinane be-Untold Biography Facts